Daawo Sawirrada: Wakiilka Midowga Afrika oo xarigga ka jaray dugsi ciidan oo AMISOM ka hirgelisay deegaanka Jasiira | Baydhabo Online
Daawo Sawirrada: Wakiilka Midowga Afrika oo xarigga ka jaray dugsi ciidan oo AMISOM ka hirgelisay deegaanka Jasiira
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Africa u qaabilsan Soomaaliya ahna madaxa AMISOM, Ambassador Francisco Madeira ayaa xarigga ka jaray dugsi cusub oo lagu tababarayo ciidamada kala duwan ee dowladda Federaalka Soomaaliya.
Dhismaha dugsigan oo bilaeday bishii December ee sanadkii hore, ayaa waxaa munaasabadii furitaankiisa ka qeybgalay saraakiil ka socotay qeybta tababarka Midowga Yurub, AMISOM iyo taliska ciidamada Soomaaliya.
Ergayga gaarka ah ee midowga Africa ahna madaxa AMISOM, Ambassador Francisco Madeira, ayaa sheegay in howlgalka tababarka ciidanka Soomaaliya uu qeyb ka yahay howsha loo igmaday isla markaana qeyb ka yahay istaraatijiyada bixitaanka ciidamada Midowga Afrika si booskooda u buuxiyaan kuwa Soomaaliya.
“Haddii la helo askar iyo saraakiil Soomaali ah oo tababaran, waxaa laga maarmi doonaa kaalmada aan siino Dowladda, Sidaas daraaddeed, waxaan u baahanahay in si fiican loo tababaro oo si deg deg ah lagu dhiiriyo geliyo in howshooda si awood leh u qabsadaan “ayuu yiri Ambassador Madeira.
Taliyaha guutada koowaad ee ciimada xoogga dalka Gen. Cabdullaahi Cali Caanood, ayaa uga mahadceliyey Midowga Yurub iyo AMISOM tababarka iyo taageerada ay ciidamada u fidiyan, isagoo tilmaamay in xaruntaani ay wax badan ka faa’iidi doonaan cutubyada ka qalin jabiya.